Home » အသားပေး » အနီရောင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံ: ဟိုက်ဒရိုဂျင် ONE ကတည်းကထုတ်ဖော်ပြသ!
အနီရောင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံ: ဟိုက်ဒရိုဂျင် ONE ကတည်းကထုတ်ဖော်ပြသ!
အနီရောင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံ အမှန်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုလုပ်ငန်း impact, ဒါပေမယ့်လည်းဆက်သွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းလိမ့်မယ်မသာတဖြစ်မြောက်မြားစွာအတိတ်တွင်ဖြတ်တောက်အစွန်းနည်းပညာထိုးဖောက်, ဤကြေညာချက်ကိန်းဂဏန်းများကြေညာခဲ့သည် (ဟုတ်ကဲ့, သင်ပိုင်ခွင့်, မိုဘိုင်းဖုန်းကိုစက်မှုလုပ်ငန်းအတိအကျဖြစ်ကြောင်းကိုဖတ်! ) ။ လုံခြုံစွာသင့်ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲမှာသယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်သည့်ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး holographic မီဒီယာဖန်တီးမှုစက်, မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်မဆိုရယ်စရာရှာဖွေနေမျက်မှန်ဝတ်ဆင်ခြင်းမရှိဘဲ, အဆိုပါ ဟိုက်ဒရိုဂျင် ONE မိုဘိုင်းဗီဒီယိုကဖန်ဆင်းခြင်းကိုဖုန်း! အဆိုပါတိုက်တေနီယမ်မော်ဒယ်များအတွက်လူမီနီယမ်မော်ဒယ်နှင့် $ 1,195.00 များအတွက် $ 1,595.00 မှာစတင်ခြင်း အသီးသီး, ဒီနည်းပညာကိုဆက်ဆက် (မြင့်သောခြောက်လကိန်းဂဏန်းလစာတစ်ဦးနှစ်လယ်ပိုင်းနှင့်အတူ) ပျမ်းမျှစားသုံးသူငှါ, ဒီဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်မှယခုမူကားမသာတဲ့ဘတ်ဇ်ဖန်တီးမည်!
ဟိုက်ဒရိုဂျင် ONE က Android OS ကိုအပေါ်လည်ပတ်မည်ဖြစ်ပြီးအသုံးပြုသူတစ်ဦးတစ်ဦး 5.7 "Professional ကဟိုက်ဒရိုဂျင် holographic display ကိုချောမွေ့စွာနှစ်ဦးစလုံးရှုခင်းအတွက်ရိုးရာ 2D အကြောင်းအရာ, holographic Multi-အမြင်အကြောင်းအရာ, 3D အကြောင်းအရာနှင့်အပြန်အလှန်ဂိမ်းအကြားအကူးအပြောင်းလိမ့်မယ်ဘယ်မှာ" အတှေ့အကွုံကိုလှုံ့ဆော်ဖို့အာရုံခံ "ငါပေးမည် နှင့်ပုံတူသည် modes!
မျက်နှာပြင်အပြည့်ကြည်လင်ပြတ်သားမှု / ကြည့်ရန် holographic အနီရောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင် 2-ကြည့်ရန်အကြောင်းအရာ (H4V) / ကြည့်ရန်စတီရီယို 4D အကြောင်းအရာ / ကြည့်ရန် 3D-2D VR, AR နှင့် MR မှာပုံမှန်အားဖြင့်လူအပေါင်းတို့ရိုးရာ 3D အကြောင်းအရာကြည့်ရှုပါ။ အဆိုပါ OS ကိုသို့ embedded ပါလိမ့်မည်သည့်စီးပွားဖြစ်အသံ H30 algorithm ကို, အသုံးပြုသူတစ်ဦးကစစျမှနျတဲ့ 5.1 ကျယ်ပြန်ဘက်ပေါင်းစုံအသံအတွေ့အကြုံကိုငါပေးမည်။ အဆိုပါ ဟိုက်ဒရိုဂျင် ONE ဒါ့အပြင်အနီရောင်ကင်မရာအစီအစဉ်ကိုသို့ပေါင်းစည်းမည်, နှင့် (သင်ကမှန်းဆ) နဲ့အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်: နီသောအထည်, EPIC နှင့်လက်နက် ဒီပြည့်စုံထိန်းချုပ်မှုစင်တာအောင်အသုံးပြုသူတစ်ဦး interface နဲ့မော်နီတာအဖြစ်!
ဒါကြောင့် box ထဲမှာဘာ: အဆိုပါဟိုက်ဒရိုဂျင် ONE မီဒီယာစက်ကို USB-C မှာကေဘယ်လ်ကြိုးများနှင့်အားသွင်းနှင့်တိုးချဲ့ Mirco SD ကဒ် slot ပါနှင့်အနာဂတ် attachment များကိုနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက်ပေးသွားမှာပါ early- ယင်းယူနစ်မိန့်များအတွက် "အထူးသေးငယ်တဲ့လက္ခဏာသက်သေ" နှင့်တကွကြွလာ ဟိုက်ဒရိုဂျင် format နဲ့ holographic ပုံရိပ်တွေအဘို့အမြင့်မားအရည်အသွေးနှင့်နေဆဲပုံရိပ်တွေနဲ့ (သင်တန်း) ရိုက်ကူး။ အဆိုပါမျှော်မှန်းထား ပစ်မှတ်သင်္ဘောနေ့စွဲ မဘို့ရာခန့်ထားသည် Q1 2018!
(သင့်အိမ်နီးချင်းသို့မဟုတ်ပင်သင့်ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သက်တူရွယ်တူငြူစူစေ) မီဒီယာစက် - pre-order ဒီ "တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာများထဲမှ" ရန်။ ဤနေရာတွင် Go:www.red.com/hydrogen
အနီရောင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံအကြောင်း: 2006 မှာတော့အနီရောင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံအဆိုပါ 4K အနီရောင်ONE®ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာ-ပြောင်းလဲများ၏အနာဂတ်နှင့်အတူတော်လှန်ရေးစတင်ခဲ့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး။ နှစ်နှစ်အကြာမှာတော့အနီရောင်သစ်တစ်ခုDSMC® (ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆဲနဲ့ Motion ကင်မရာ) စနစ်နှင့်အတူရုပ်ရှင်ရုံဆဲနှစ်ဦးစလုံးရိုက်ကူးနိုင်မယ့်ကင်မရာကိုဖြန့်ချိခြင်းအားဖြင့်မှိုချိုးဖဲ့။ ဤသည်အောင်မြင်မှုများအတူတူပင်ကင်မရာကထိုကဲ့သို့သော '' အဆိုပါ Hobbit '' trilogy ပာအဖြစ် features တွေရိုက်ကူးဖို့အသုံးပြုခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သော '' Vogue '' အဖြစ်မဂ္ဂဇင်းအဘို့အဖုံးများနှင့်အယ်ဒီတာ့အာဘော်ဖမ်းဆီးဖို့ Cards'-၏အိမ် '' Girl'-အဖြစ်သူဟာ Emmy-အနိုင်ရ Gone '' ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ 2014 မှာတော့အနီရောင် 4K REDCODE RAW သခင်ဖန်တီးကိုလည်းမနက်ဖြန်ရဲ့ 6K စျေးကွက်အတွက်-အနာဂတ် proofed ကြောင်းယနေ့စတူဒီယိုနှင့်ထုတ်လွှင့် application များအတွက်အဖြေတစ်ခုရိုက်ကူးနေစဉ် shooters 4K အတွက်တိုက်ရိုက်စီးဆင်းခွင့်ပြုတဲ့ထုတ်လွှင့်ဖြေရှင်းချက်ပေးစတင်ခဲ့သည်။ ယခုနှစ်တွင်အနီရောင်, အWEAPON®ကင်မရာအနီရောင်DRAGON®အာရုံခံမိသားစုတစ်စု၏နောက်ဆုံးပေါ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ လက်နက်များအနီရောင်ရဲ့အများဆုံးကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်ပေါ့ပါးသောကင်မရာBRAIN®အစဉ်အဆက်ဖြစ်ပြီးထိုကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းအသွားအလာတိုးမြှင့်မှုများ, cable ကို-အခမဲ့နှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ရံပစ္စည်း, ဘက်ပေါင်းစုံ Mount, နှင့် Apple ProRes နှင့် REDCODE RAW ၏တစ်ပြိုင်နက်မှတ်တမ်းတင်အဖြစ်အသစ်သောအင်္ဂါရပ်များပါဝင်သည်။ အံ့သြဖွယ်အရောင်သိပ္ပံနှင့် dynamic range ကိုဝါကြွားခြင်းတို့သည် 19-megapixel အနီရောင် DRAGON အာရုံခံကိရိယာသင်ရှိမရှိဓာတ်ပုံဆရာ, ရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင်, ဒါမှမဟုတ်ထုတ်လွှင့်-အနီရောင်သငျသညျဖုံးအုပျမူကြောင်းကိုအားဖြည့်နေဆဲဖြစ်သည်။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ SoftAtHome, MStar, CES2017 ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် virtual reality	2017-07-10
ယခင်: ENENSYS SMPTE သြစတြေးလျ 2017 စမ်းကြည့်ရန်
နောက်တစ်ခု: အဆိုပါပြောင်းလဲမည် Capital ကိုဂီတပွဲများအတွက်ပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများပေး "တစ်ဦးကကက်ပီတောလ်စတုတ္ထ!"
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "အနီရောင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံ: ကတည်းကထုတ်ဖော်ပြသဟိုက်ဒရိုဂျင် ONE" ။ http://www.broadcastbeat.com/red-digital-cinema-hydrogen-one-unveiled/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။